အပုပ်နံ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရသည့် အတွက် စစ်ဆေးရာက အခန်းတွင်း သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦး ၏ အလောင်းကို တွေ့ရှိ •
12/06/2019 lin htet News 0
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ ဆင်ရေကန်လမ်း၊ တိုက်အမှတ် (၃၅)၊ ဒုတိယ ထပ် ရှိ အခန်းတွင်…..
အမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံးနေသည်ကို အပုပ်နံ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရသည့် အတွက် စစ်ဆေးရာက သိရှိခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရသည့် အာမာန် လူငယ်ပရဟိတ အသင်းထံက သိရသည်…….
.သေဆုံးသူ အမျိုးသား မှာ အခင်းဖြစ် အခန်းတွင် တစ်ဦးတည်း နေထိုင်သည့် ဦးညီညီ ဆိုသူ ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၁၀ ရက် ညပိုင်း ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ် အချိန်က အလောင်းကို တွေ့ရခြင်း ဖြစ်ကာ ကွန် ပြူ တာ နှင့် ပတ် သက် သော ဆ ရာ တစ် ဦး ဖြစ် သည် ဟု သိ ရ ကြောင်း….
အ ဆို ပါ ပ ရ ဟိ တ အ သင်း မှ ကိုလှိုင် ဘွား အောင် က ပြည် မြန် မာ ကို ပြော သည်……
“သူတို့ ပြောတာတော့ အိမ်သာကနေ ချော်လဲပြီး ခေါင်းနဲ့ ဆောင့် သေဆုံးသွားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်…..
အိမ်မှာ သူတစ်ယောက်တည်း နေတာပါ တ က္က သိုလ် က ကျောင်း ဆ ရာ လို့ ပြော တာ ပဲ။ စာ ရွက် စာ တမ်း တွေ က လည်း နည်း ပ ညာ နဲ့ ပတ် သက် တာ တွေ့ ရ တယ်” ဟု ၎င်း က ဆို သည် အိမ် နီး နား ချင်း များ က အ ပုပ် နံ့ ထွက် သည့် အ တွက် သက် ဆိုင် ရာ ကို အ ကြောင်း ကြား ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ပြီး…သေ ဆုံး နေ သည့် မှာ လေး ရက် ကျော် အ ထိ ပင် ကြာ နေ ပြီ ဟု ခန့် မှန်း ထား ကြောင်း သိ ရ သည်….
ထက်အောင်ဖြိုး (ဓာတ်ပုံ – အားမာန် လူငယ်ပရဟိတ အသင်း)
အပုပျနံ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရသညျ့ အတှကျ စဈဆေးရာက အခနျးတှငျး သဆေုံးနသေညျ့ အမြိုးသားတဈဦး ၏ အလောငျးကို တှရှေိ့
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ အလုံမွို့နယျ၊ ဆငျရကေနျလမျး၊ တိုကျအမှတျ (၃၅)၊ ဒုတိယ ထပျ ရှိ အခနျးတှငျ…..
အမြိုးသား တဈဦး သဆေုံးနသေညျကို အပုပျနံ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရသညျ့ အတှကျ စဈဆေးရာက သိရှိခဲ့ရကွောငျး အဆိုပါ ဖွဈစဉျတှငျ ကူညီဆောငျရှကျပေးခဲ့ရသညျ့ အာမာနျ လူငယျပရဟိတ အသငျးထံက သိရသညျ……..
သဆေုံးသူ အမြိုးသား မှာ အခငျးဖွဈ အခနျးတှငျ တဈဦးတညျး နထေိုငျသညျ့ ဦးညီညီ ဆိုသူ ဖွဈပွီး ဇှနျလ ၁၀ ရကျ ညပိုငျး ၈ နာရီ ၅၅ မိနဈ အခြိနျက အလောငျးကို တှရေ့ခွငျး ဖွဈကာ ကှနျ ပွူ တာ နှငျ့ ပတျ သကျ သော ဆ ရာ တဈ ဦး ဖွဈ သညျ ဟု သိ ရ ကွောငျး….
အ ဆို ပါ ပ ရ ဟိ တ အ သငျး မှ ကိုလှိုငျ ဘှား အောငျ က ပွညျ မွနျ မာ ကို ပွော သညျ……
“သူတို့ ပွောတာတော့ အိမျသာကနေ ခြျောလဲပွီး ခေါငျးနဲ့ ဆောငျ့ သဆေုံးသှားတယျလို့ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ….
အိမျမှာ သူတဈယောကျတညျး နတောပါ တ က်က သိုလျ က ကြောငျး ဆ ရာ လို့ ပွော တာ ပဲ။ စာ ရှကျ စာ တမျး တှေ က လညျး နညျး ပ ညာ နဲ့ ပတျ သကျ တာ တှေ့ ရ တယျ” ဟု ၎င်းငျး က ဆို သညျ အိမျ နီး နား ခငျြး မြား က အ ပုပျ နံ့ ထှကျ သညျ့ အ တှကျ သကျ ဆိုငျ ရာ ကို အ ကွောငျး ကွား ခဲ့ ခွငျး ဖွဈ ပွီး သေ ဆုံး နေ သညျ့ မှာ လေး ရကျ ကြျော အ ထိ ပငျ ကွာ နေ ပွီ ဟု ခနျ့ မှနျး ထား ကွောငျး သိ ရ သညျ….
ထကျအောငျဖွိုး (ဓာတျပုံ – အားမာနျ လူငယျပရဟိတ အသငျး)